क्वाँटी किन खाने ? क्वा्टी खानुका फाइदा Artha daily : Best Online Nepali news portal
अर्थ डेली प्रकाशित: २०७६-४-३० गते
क्वाँटी किन खाने ? क्वा्टी खानुका फाइदा
काठमाडौं । जनैपूर्णिमा अर्थात् क्वाँटी खाने दिन। क्वाँटी जनै पूर्णिमाको विशेषता नै हो। बिहान गुरुले जपेको डोरो हातमा बाँध्ने र जनै फेरेपछि क्वाँटी खाने गरिन्छ। साथै तराईक्षेत्रमा यस दिन दिदी-बहिनीले आफ्ना दाजु-भाइको दीर्घायुको कामना गर्दै राखी बाँध्ने पनि गरिन्छ ।
केराउ, चना, मुगी, मास, सिमी, भटमासलगायतका नौवटा गेडागुडी मिसाई चार /पाँच दिन पानीमा भिजाएर टुसा निक्लिएपछि क्वाँटी तयार हुन्छ। क्वाँटीबाट 'कम्प्लिट प्रोटिन' अर्थात् पूर्ण प्रोटिन पाइन्छ। विभिन्न गेडागुडीको मिश्रणबाट तयार पारिने भएकाले क्वाँटीलाई शक्तिवर्धक पौष्टिक आहारका रुपमा लिइन्छ।
नियमित क्वा्टी खानुका फाइदा
- पाचनशक्तिमा सुधार ल्याउँछ
- स्मरणशक्ति बढाउँछ
- समय नपुग्दै आउने बुढ्यौलीलाई रोक्छ
- कब्जियतको समस्या हटाउँछ
- रक्तसञ्चार तथा स्नायु प्रणालीलाई फाइदा गर्छ,
- सौन्दर्यमा निखार ल्याउँछ
- हड्डी दुख्ने समस्या हटाउँछ
- कपाल झर्ने समस्याबाट बचाउँछ
- छिट्दै आउने चाउरीबाट जोगाउँछ
- सुत्केरीलाई खुवाउँदा प्रशस्त मात्रामा दूध आउँछ।